Ejipta · Janoary, 2019 · Global Voices teny Malagasy
Ejipta · Janoary, 2019
Tantara mikasika ny Ejipta tamin'ny Janoary, 2019
Hafanam-po 26 Janoary 2019
Mediam-bahoaka 26 Janoary 2019
Navotsotra ny 23 Janoary 2009 ilay bilaogera Ejiptiana, Reda Abdel-Rahman (32 taona) rehefa notanana hatramin'ny volana Oktobra 2009. Mpiasa ara-tsosialy tao amin'ny Ivontoeram-pivavahana mifandray amin'i Al-Azhar i Reda. Ity bilaogera tanora ity dia fantatra amin'ny maha "Koranista" (mpandala ny Coran) azy izay tsy mankato ny Sunnah
Fahalalahàna miteny 26 Janoary 2019
Nanjavona ilay bilaogera Ejiptiana
(Marihina fa tamin'ny volana Aogositra 2007 no nivoahan'ny lahatsoratra teny Anglisy) Nitatitra ireo bilaogera tany Ejipta fa hita niady tamin'ny mpitandro filaminana talohan'ny nanampenana ny masony sy nitondrana azy nitsoaka tamin'ny fiarabe i Ahmed Saad Domah. Vao avy nanomana fanangonan-tsonia manohitra ny fitondran'ny filoha Hosni Mubarak moa ity poeta ity...
Manamarika ny herinandro namoahana ny didy famotsorana faha-valo an'ilay bilaogera Ejypsiana Mos'ad Suleiman Hassan (a.k.a. Mos'ad Abu Fagr) androany; Na dia teo aza izany, dia mbola any amin'ny tobin'ny polisy ao El Arish (Sinai Avaratra) foana i Fagr .
Rehefa avy notazonina natao fanadihadiana nandritra ny 15 andro, dia mbola any am-ponja ilay bilaogera Ejipsiana Ahmed Mohsen, satria voampanga ho "Manararaotra ny toetrandro demaokratika hanonganana governemanta"